Nhau - PET makapu epurasitiki nemabhodhoro
Sei zvigadzirwa zvePET zvinogadzirwa?
Chikamu chidiki chemafuta epasi rose chinoshandiswa kugadzira PET makapu epurasitiki nemabhodhoro.
4% yemafuta epasi rose anoshandiswa kugadzira mapurasitiki ese
Yekuisa iyi, chete 1,2% yepurasitiki kurongedza inoshandiswa kugadzira PET epurasitiki zvinwiwa makapu nemabhodhoro
Iyo indasitiri, inoenderana nebasa rayo rezvakatipoteredza, iri kugara ichitarisa nzira dzokuderedza kuwedzera huwandu hwemvura yainoshandisa mukugadzira kwayo.
COPAK's PET CUPS akagadzirwa kweakabva PET zvinhu. Iwo akajeka sekristaro uye anogona kuratidza kesi zvinwiwa zvako zvakajeka. Izvi zvinobata vatengi maziso uye kusimudzira michero yako. Asi ikozvino kuchengetedzwa kwenzvimbo kuri kuramba kuchikosha, saka takagadzira PLA makapu. PLA makapu anogadzirwa nemidziyo uye anogadzikana. Asi mutengo wacho wakanyanya kukwirira uye kugona kwekugadzira hakuna kukura zvakanyanya. Imhaka yekushaikwa kwezvinhu kunyangwe kunze kweChina kwese. Nekudaro, kana iwe uchida PLA makapu isu tinogonawo kukunyorera iwe, ingori nguva yekuendesa pamwe ingangodaro yakati rebei.
Vamwe vatengi vanoda kuziva kuti kapu yePET inogadzirwa sei nejecha rePET. Iyi inotevera nzira Inogona Kugadzirisa yako zvinokanganisa.
Asati a 2020, vatengi vazhinji vanoshanyira yedu PET kapu yekugadzira fekitori uye PET mabhodhoro ekugadzira fekitori. Yepamberi otomatiki yekugadzira muchina uye yedu yakachena semusangano zvese zvinosangana nevatengi vedu kutarisira. Yese nzira yekugadzira inosangana neyakajairwa chikafu uye isu tine vanopfuura BRC, ISO, FDA, SGS zvitupa. Isu tese tinoziva kuti mu2020, chivimbo 19 chakaputika uye mazhinji emabhizimusi epasi rose emabhizimusi anomiswa. Vatengi vekunze havagone kutishanyira izvozvi. Asi usazvidya moyo, isu tine mhando yevimbiso. Mavhidhiyo nemifananidzo zvinofanirwa kuratidzwa, Tichatumira zvigadzirwa zvitsva kwauri mune yako inotevera kuraira.
Mune china, zvese zvadzokera kune zvakajairwa track ikozvino. Yedu yekugadzira inokwana makapu ePET uye mabhodhoro ePET ave akafanana sepakutanga. Nguva yekuendesa inogona kuve nechokwadi. Gamuchira chero kubvunza kutsva kuCOPAK.